Plumber Crack 1.7.77 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7.77 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား အားကစား ဂိမ္းမ်ား Plumber Crack
Plumber Crack ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မီးဖိုချောင်စုပ်အောက်မှာရိုးရာရေပိုက်သမား Crack မှာပစ္စည်းပစ္စယပစ်။ သင့်ရဲ့ရုံးခန်းစားပွဲခုံအောက်၌အိုင်တီ Technician အစ, ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံးအက်ကွဲမျက်မှောက်အဘို့အသွားပါ။ Plus အားကျွန်တော်သစ်ကိုမြင်ကွင်းများကိုသင်ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါက်သင်၏ "အက်ကွဲ" hone ရန်အဘို့အခြိနျလုံးထည့်သွင်းပါတယ်။
☆သင့်ရဲ့ရေပိုက်သမား Pick: Norm သို့မဟုတ်ဘက်တီ
☆, မီးဖိုချောင်မှာသူတို့ရဲ့ Butt အတွက်ရုံးအမှုအရာဆမ်းနှင့်ဂေါက်ကွင်းအပေါ်
☆သူတို့ရဲ့ Butt အတွက်ပစ်ခြင်းငှါထက်ပိုမို 15 ပစ္စည်းများမှရွေးပါ
ခေါနှင့်အတူကျပ်ပုံးဝင်ငွေ☆အပြီးအစီး collection များကိုထပ်ခါထပ်ခါ
☆ Arcade, Sharpshooter နှင့်အချိန်စိန်ခေါ်သည် Modes
☆ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များနှင့် 55+ အောင်မြင်မှုများ - သင့်အက်ကွဲကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ပေါက်နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုအထင်ကြီး
လူတိုင်းရှိခဲ့ရဲ့: သင်ပယ်ရှင်းကိုကြည့်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်သင်တို့ကိုစိုက်ကြည့်ရပ်တန့်မပေးနိုငျသညျ! ယခုမှာအစဉ်အဆက်ထက်ပိုပြီး, သင်ရုံရှိသေးတစ်ခုခု drop ကြောင့်တစ်ဦးရေခဲပြင် Cube, မြေပဲ, ရပ်ကွက်သို့မဟုတ် Bouncy Ball ကို (အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ) ရဲ့ဖြစ်ပျက် ... ရှိမရှိကြည့်ရှုချင်တယ်။
နောက်ထပ်ယူ, သင်၏ရေပိုက်သမားသို့မဟုတ်အိုင်တီ Tech မှတက်ဝတ်စားဆင်ယင်။ ပြင်သစ်အိမ်ဖေါ်မတ်မတ်သို့ Norm ဆမ်း, သို့မဟုတ်သူမ၏ snorkeling ဂီယာအတွက်ဘက်တီ၌ထားလေ၏။ သင်တစ်ဦး Elvis, စူပါဟီးရိုးသို့မဟုတ်အားကစားပန်ကာရှိပါသလား လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်!
မပြီးဆုံးလိုက်တဲ့ touch နှင့်မှင် Tattoos နှင့်သင်၏ရေပိုက်သမားသို့မဟုတ်အိုင်တီနည်းပညာထည့်ပါ။ "Daddy ရဲ့မိန်းကလေး" မှ "မှေးဖှားစီး" - Bullseyes မှအနီရောင် Roses: သင်ထင်သည့်တက်တူးထိုးအကောင်းဆုံးကြည့်နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး backside ပေါ်မှာပါးရိုက်လိမ့်မယ်ကောက်!
သငျသညျ, ထဆေးထည့်သင့်ဒေသခံရေပိုက်သမားအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့် inking သို့မဟုတ်အိုင်တီ Tech မှအိပ်မက်မက်နှင့်ယခုသင်သည်တတ်နိုင်ပါတယ်!
သငျသညျရုံးလူရှုပ်ဆောင်ခဲ့သောရှေးရှေးထဲကနေလွင်ပြင်, ရီစရာပျော်စရာ၏နာရီ။ ယနေ့ရေပိုက်သမား Crack Play နှင့်၎င်းတို့၏ Butt အတွက်ပစ္စည်းပစ္စယပစ်: မီးဖိုချောင်ထဲမှာ, ရုံးနှင့်ဂေါက်ကွင်းအပေါ်!
145 နိုင်ငံများတွင်ထက်ပို 18 သန်းကိုလူရေပိုက်သမားရဲ့တင်းပါးအတွက်ပစ္စည်းပစ္စယနဲ့ပေါက်ပျော်မွေ့!
➤ယနေ့ရေပိုက်သမား Crack Play!
Facebook ပေါ်မှာရေပိုက်သမား Crack "လိုပဲ" - https://www.facebook.com/PlumberCrackGame
ရေပိုက်သမား Crack Fluik Entertainment က, ထိုကဲ့သို့သောရုံးမှလူရှုပ်, Grumpy ဝက်ဝံနှင့် Streaker Run ကိုအဖြစ်မတရားသောသူသည်-ပျော်စရာမိုဘိုင်းဂိမ်းထုတ်လုပ်သူများအားဖြင့်သင်တို့မှနှုတ်ဆောင်သည်။ Google Play စပေါ်မှာရှိသမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း Browse - https://play.google.com/store/apps/developer?id=Fluik
ကြောက်မက်ဘွယ်ဂိမ်းကြေညာချက်များနှင့်အခြားမွမ်းမံမှုများအတွက် Twitter ပေါ်တွင် @FluikGames ကိုလိုက်နာပါ။
ကြောက်မက်ဘွယ်ရေပိုက်သမား Crack ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီရမည့်အစားသင့်ရဲ့ app ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှာသူတို့ကိုပို့စ်တင်၏, ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်မဆို bug ကိုအစီရင်ခံစာများသို့မဟုတ်တိုင်ကြားချက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့ Google Play တွင် app ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမှ reply နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အမျိုး, သင်နှင့် Facebook ကိုပန်ကာစာမျက်နှာပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အားနည်းချက်များကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များ post http://www.facebook.com/PlumberCrackGame, ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကိုအီးမေးလ်ပို့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်ရန်ကပိုဖွယ်ရှိနေ support@fluik.com
Plumber Crack အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Plumber Crack အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Plumber Crack အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Plumber Crack အား အခ်က္ျပပါ
kellyskreations စတိုး02.09k
Plumber Crack ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Plumber Crack အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.7.77
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://fluik.com/privacy.php
လက်မှတ် SHA1: 86:17:DF:18:80:27:A4:F5:A1:E0:4E:25:2E:73:BE:8E:C7:95:A6:25
အဖွဲ့အစည်း (O): Crazed Coders
Plumber Crack APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ